‘दिमागमा कुनै विषय झट्ट आए डायरीमा टिपिहाल्छु’ « Drishti News – Nepalese News Portal
‘दिमागमा कुनै विषय झट्ट आए डायरीमा टिपिहाल्छु’
२५ मंसिर २०७८, शनिबार 1:06 pm
काठमाडौं । युवराज अधिकारी हाल नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । निगममै साढे तीन दशक विताएका अधिकारी कुसल सर्जक पनि हुन् । उनी गीत, कविता र कथा लेखनमा रुची राख्छन् । वि.सं. २०१९ साल साउन १५ गते इलाममा जन्मेका अधिकारीको विद्यालय जीवनमै वि.सं.२०३५ सालमा ‘मेरा चित्कारहरू’ कविता संग्रह प्रकाशित भएको थियो ।
वि.सं. २०७६ सालमा ‘देउरालीको फूल’ गीति एल्बम प्रकाशित भएको छ । उक्त गीति एल्बममा ६ वटा गीत समावेश छन् । सुरेश अधिकारीको एकल संगीत रहेको एल्बममा दीप श्रेष्ठ, रामकृष्ण ढकाल, स्वरुपराज आचार्य, प्रमोद खरेल र मिना निरौलाको स्वर छ । वि.सं.२०३५ देखि विभिन्न साहित्यिक पत्र–पत्रिकामा अधिकारीका रचनाहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन् । उनका गीत र कविताहरूको संग्रह प्रकाशोउन्मुख छ । जसमा अधिकारीले अहिलेसम्म लेखेका गीत र कविता समावेश हुनेछन् । तर, अधिकारीले त्यसको न्वारन भने गरिसकेका छैनन् ।
एउटा कर्मचारीले दैनिक कार्यालयमै समय बेथित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेजस्तै सिर्जनशील अधिकारीलाई लेख्न समयले छेकेन । उनी बिहान र बेलुका अझ कतिपय बेला त रातीको समय सिर्जनामा खर्चन्छन् । उनी भन्छन, ‘सिर्जनाको विषयमा ठ्याक्कै यतिबेला भनेर हुँदैन, कुन समय आफूलाई लेख्न मन लाग्छ, त्यो नोट गरिहाल्छु । जुन बेला फुर्छ, त्यही बेला लेख्छु । घरमा अरु सुतिसकेपछि पनि म कविता लेखेर बस्छु । सवारी चलाएको बेला दिमागमा कुनै विषय झट्ट आयो भने केही पार्किङ गरेर डायरीमा टिपिहाल्छु ।’
कथा, कविता र गीतको भेद
एम.ए., बि.एल.सम्मको औपचारिक शिक्षा लिएका अधिकारीका कथा, कविता र गीतमा फरकपन भेट्न सकिन्छ । सिर्जनामा देशभक्ति, स्वाधिनता र स्वाभिमान झल्कनुपर्ने उनको मान्यता छ । मानवीय पक्षलाई समेटेर आफूले देखेको÷भोगेको र अरुले देखेको÷भोगेको विषयलाई समेटेर उनी कलम चलाउँछन् ।
कवि, कथाकार र गीतबार अधिकारीलाई समय र मेहनतका हिसावले कविता सजिलो लाग्छ । उनी भन्छन, ‘कथामा अलि धेरै समय दिनुपर्छ, गीतमा अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । सबै गीत कविता हुन्, सबै कविता गीत हुँदैनन् । गीत बन्नका लागि त्यसको प्यारामिटर मिल्नुपर्छ । म्युजिक मिल्नुपर्छ । स्वरमा पनि लयवद्ध हुनुपर्छ । थोरै शब्दमा धेरै भावना अँटाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले कविता अलि सजिलो हुन्छ ।’
नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय कवि गोष्ठी तथा बौद्धिक सम्मेलन (विसं २००९) भएको इलामको नमुना माध्यामिक विद्यालय करफोकमा अध्ययन गर्दादेखि नै अधिकारीमा साहित्यिक चेत जागिसकेको थियो । अतिरिक्त क्रियाकलाप र साहित्यिक गोष्ठी प्रतीभा देखाउन थलो बनेको थियो । यसैपनि इलाम प्राकृतिक रुपमा साहित्यिकको उर्वर क्षेत्र, त्यसमाथि भौगोलिक रुपमा निकट भएकाले दार्जिलिङको प्रभावले अधिकारीलाई सर्जक बन्न प्ररणा दियो ।
समाज रुपान्तरणमा साहित्यको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सिर्जना सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन उनी । उनी भन्छन ‘सिर्जना समाजलाई योगदान दिने खालको हुनुपर्छ । साहित्यले मानवीय भावना र संवेदनालाई समेट्नुपर्छ । सजिव हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई पनि समेट्न सक्नुपर्छ । समग्रमा सिर्जनाले मान्छेको जीवनमा सकारात्मक योगदान दिन सक्नुपर्छ ।’
सिर्जनशील र सकारात्मक साहित्य टिकाउ हुन्छ । मानवीय मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्दै स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अधिकारीले कलम चलाउदै आएका छन् । अधिकारीले व्यवसायिक नभइ सोखको रुपमा साहित्य सिर्जनालाई अघि बढाउँदै आएका छन् । अधिकारी परिवार प्रशासनिक पृष्ठभूमिको हो । उनको बाजे राइटर विश्वनाथ अधिकारी राणाकालमै इलाम जिल्लामा प्रशासक थिए ।
सिर्जना कुनै पनि धारमा बाँधिनु नपर्ने उनको मत छ । उनी भन्छन, ‘सिर्जना मान्छेको जीवनसँग, प्रकृतिसँग जोडिनुपर्छ । देश, काल, परिस्थितिसँग मिल्नुपर्छ । कुनैपनि सिर्जना कुनै पनि बन्धनभित्र बाँधिनु हुँदैन ।’
‘तिमी, तिमी जस्तै हुनु’
तिमी, तिमी जस्तै हुनु
म नि आफूजस्तै हुन्छु
यात्रा हो जीवन साथी
हिंड्दा कहिल्यै नहराउनु
हार्दा कहिल्यै नडराउनु
प्रत्येक हारले जित जन्माउँछ
नभए नि सपना देखाउँछ
पाइला शिखरमा पनि हराउँछ
हो तिमी, तिमी जस्तै हुनु
उ जस्तै हुन नखोज्नु
तर, मर्म, कर्म र धर्म राख्नु
सफलताको विज खोज्नु
जिन्दगी आफ्नै हो
आफै भएर बाच्नु
हो, हाँस्दा सँगै हाँसिदेलान
साथ सम्झेर ढुक्क नहुनु
आँशु पुच्दै आँखा खोल्दा
एक्लो पाएर विचलित नहुनु
जिन्दगी कलिकति भाग्य र
धेरै कर्मको संयोजन ठान्नु
एउटै बतास र एउटै आकाश भएपनि
स्वास आफ्नो–आफ्नै ठान्नु
ईश्वर एउटै भएपनि
संस्कार आफ्नो–आफ्नै मान्नु
साथी तिमी–तिमी जस्तै हुनु
म नि आफू जस्तै हुन्छु
युद्धको मैदानमा उभिएपछि
साहास र कर्तव्यलाई जान्नु
कहिले हुरी, कहिले बतास
घाम पानीको जिन्दगी ठान्नु
रै पनि साथी
एक जुनी न हो जिन्दगी
म नि आफू जस्तै हुन्छु ।